Android Game — Blogs, Pictures, and more on WordPress
» Android Game	Mario Madness
Clash of Clans - First Android Game on Mario Madness! Welcome to Clash of Clans, the first android game on Mario Madness! This isn’tawalkthrough, more ofaguide and tips and tricks to help you through COC. 23 more words
Ice Age Village ဂိမ်း အစုံ Iceage Village game လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Iceage Village ဂိမ်းလေးဟာ Smurf Village ပုံစံမျိုး ဂိမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ ကာတွန်းဇာတ်ကား ကြည့်ဖူးသူများအနေဖြင့်ဒီ ဂိမ်းထဲမှာပါတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့နာမည်တွေကို ပိုပြီး သိကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီထဲမှာ ဂိမ်းကို အဓိက အပိုင်း ၂ ပိုင်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ပထမ တစ်ပိုင်းက ရိုးရိုး ဂိမ်းကို ဆော့လို့ ရအောင် Iceage Village apk+data ထည့်ထားပေးပါတယ်။ အချိန်ပေးနိုင်သူများ နဲ့ရိုးရိုး ဆော့ကစားခြင်သူများ အဆင်ပြေစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယ တစ်ပိုင်းမှာတော့ ဒီဂိမ်းကို hack တဲ့ file တွေကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ Hack file နဲ့ အတူ ထည့်သွင်းနည်းကိုပါ တစ်ပါတည်း ပြောပြထားပါတယ်။ ဂိမ်းဆိုဒ် ချုံ့ထားတာမှာ 200MB ကျော် ရှိပါတယ်။ Rar ဖြည်လိုက်လျှင်တော့ 400MB ကျော် ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းကို ဘယ်လို ထည့်သွင်းရမလဲ။ ဘယ်လို ဟက် ရမလဲ ဆိုတာတွေကို ဖိုင်ထဲက Read me first မှာ သေသေချာချာ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ File storage နေရာ အခက်အခဲကြောင့် download link ကို ၁ လ ထိပဲ တင်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁ လ ကျော်လွန်လျှင်တော့ download link ကို ပြန်ပြီး ဖျက်သိမ်းသွားပါမည် ဆိုတာ တစ်ခါတည်း အသိပေးလိုက်ပါတယ်။ Iceage game လေးကို ထည့်သွင်း ကစားချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်မှာ ဒေါင်းယူပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။ (မောင်ညီဇော်) ဒေါင်းရန်
Baldur's Gate II: Enhanced Edition Role that marked time.
The legendary Baldur completo Gate II returns to life 13 years after mark time that is, for many, the best adventure of role of history. 248 more words
GT Racing2arrives to Google Play, over 67
cars to choose from Gameloft’s GT Racing2has now arrived to Google Play, bringing usanew racing experience that offers realistic physics and weather conditions,adriver’s view camera, and over 1,400 events with the promise of 28 new challenges each week. 194 more words
Arctic Escape HD app for Android is very popular and thousands of gamers around the world would be glad to get it without any payments. And we can help you! 89 more words
Arctic Escape HD Apk